🥇 ▷ Tumblr ayaa beddelay lahaanshaha (mar labaad) ✅
Tumblr ayaa beddelay lahaanshaha (mar labaad)
Laba sano kadib markii aan garanayn waxa la yeelayo Tumblr, Verizon wuxuu go’aansaday inuu ka iibiyo barta mareegta Automattic Inc, shirkadda teknolojiyadda ee iska leh WordPress. Si aan kuu siiyo fikrad ah sida ay u xun tahay goobta, Yahoo waxay ku bixisay $ 1.1 bilyan Tumblr sanadkii 2013, maanta waxaa lagu iibiyay kaliya $ 20 milyan.
Intii lagu jiray goobta, Verizon wuxuu mamnuucay waxyaabaha dadka waaweyn ka sameysan goobta taas oo keentay socdaalka in kabadan 30% adeegsadayaasha. Dad badan ayay la yaabeen, Automattic Inc. malaha wax damac ah oo ay ka qaadanayaan diidmada qayaxan.
Ma aanan qancin karin inaan ku soo biirno koox leh howlo la mid ah. Inbadan oo idinka mid ah waad taqaanid WordPress.com, sheyga calanka ee Automattic. WordPress.com iyo Tumblr waxay ahaayeen hormuudyaal ka mid ah baraha internetka.
Automattic waxay wadaagaysaa aragtideena ku aaddan dhisidda bulshooyinka xiisaha leh ee ku saleysan danaha la wadaago iyo dimuqraadiyaynta daabacaadda si qof kasta oo sheeko u sheego uu u sheego, gaar ahaan markii ay ka yimaadaan codadka maqalka ah iyo bulshooyinka la fogeeyo.
Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno abuurista alaabada xoojineysa iskuqeybgalkooda iyo dareenkooda bulshada isla markaana dhisaya Internet ka fiican oo isku xirnaan leh, ”ayuu Tumblr ku qoray barta rasmiga ah ee mareegta.
Hagaag hadda wax walba waa shaki la’aan. Waxaan rajeyneynaa Automattic inuu soo laaban doono Tumblr wax yar oo weynaantii ay horey u lahayd.